ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ Extract, တိရိစ္ဆာန် Extract, ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်, စက်ရုံရေနံ Extract - Tong Rui Bio-Tech မှ
အာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့ Professional က, ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည် သာ. ကောင်း၏ Make!
TRB ဟုခေါ်သော Nanjing Tong Rui Bio-Tech Co. , Ltd သည်သဘာဝကောက်နုတ်ချက်များကို ၁၈ နှစ်ကြာအာရုံစိုက်ခဲ့သည်၊ TRB သည် R & D၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ပေါင်းစပ်ထားသောနည်းပညာအခြေပြုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ TRB ထုတ်ကုန်များတွင်အပင်မှကောက်နုတ်ချက်များ၊ တိရစ္ဆာန်ထုတ်ယူမှုများ၊ အချိုများ၊ nootropics၊ သစ်သီးဖျော်ရည်နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှုန့်၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီနှင့်အာဟာရဖြည့်စွက်မှုများပါဝင်သည်။ TRB တွင်လက်ရှိတွင်စက်ရုံနှစ်ရုံရှိသည်၊ တစ်ခုသည်သန့်စင်သောသဘာဝအပင်မှထုတ်ယူသောစက်ရုံ၊ အခြားတစ်ခုသည်ပျားထွက်ပစ္စည်းစက်ရုံဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင် ISO9001, ISO22000, HACCP, ORGANICAL, FDA, HALAL, KOSHER ကဲ့သို့လက်မှတ်များအစီအစဥ်ရှိသည်။
ကျနော်တို့တက်ကြွစွာပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစာသင်ညီလာခံနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာဖလှယ်မှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နှင့်သက်ဆိုင်ရာသဘာဝကထုတ်ယူစံချိန်စံညွှန်းများရေးဆွဲ, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၏ရှေ့တန်းမှမှာအမြဲရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်ဓာတ်တိုး, aphrodisiac ပါဝင်ပစ္စည်းများ, ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်နှင့် nootropics ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်စျေးကွက်အတွက်ပူ-အရောင်းရဆုံးနှင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနယ်စပ်ဒေသဖြစ်ကြသည်။
ထိပ်တန်း R & D ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှု
ကျနော်တို့တရုတ်တွင်ထိပ်တန်း R & D အသင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုစုဝေးစေကြပြီ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့သက်ဆိုင်ရာဥရောပနှင့်အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုခံရကြပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သောဓါတ်ခွဲခန်း, ဆက်စပ်သဘာဝအဘို့အဖွံ့ဖြိုးပြီးထိရောက်သောတက်ကြွပါဝင်ပစ္စည်းများရှိသည်, အနကျအဓိပ်ပါယျနှင့် monomers ၏နက်ရှိုင်းတဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းစီးရီးတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်များနှင့်ပူထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်ပေးသက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပို့ကုန်အတွေ့အကြုံ, 200 ကျော်စီးရီးထုတ်ကုန်, နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလေ့အထများထောင်ပေါင်းများစွာ၏, 40 ကျော်နိုင်ငံများ၏ကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံ, ၏ 18 နှစ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏အခြားကုန်သွယ်ထုတ်ကုန်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနှင့်တရုတ်ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များအတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။
ဆက်စပ်အမှတ်အသားများ: နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေး